I-Brussels ithatha i-Ireland enkundleni ngokungaphumeleli ukuqokelela i-Apple ye-13.000 yezigidigidi | Ndisuka mac
I-Brussels ihambisa i-Ireland enkundleni ngokungaphumeleli ukuqokelela i-Apple ye-13.000 yezigidigidi
Kube ngunyaka okoko iKhomishini yaseYurophu ifumene izitenxo kwiirhafu ezihlawulwe yiApple eIreland ngonyaka ka-2003 nango-2014. Inkampani yaseCupertino ifumene unyango oluhle ngokuthelekiswa nezinye iinkampani zeli candelo kwaye wakwazi ukuhlawula imali encinci kunesabelo sakhe.
Kwakungelo xesha ke IKhomishini yaseYurophu igqibe nge-30 ka-Agasti ka-2016 ukuba iApple kufuneka ihlawule i-13.000 yezigidi zeerandi zoncedo olungekho semthethweni kwithuba leenyanga ezi-4 emva kokwaziswa ngokusemthethweni kwesigwebo; Ngamanye amagama, ixesha layo liphelile-ngokweKhomishini yaseYurophu uqobo-nge-3 kaJanuwari 2017.
Kwangokunjalo, ukusuka eBrussels bayazi ukuba ukubuyisa isixa esithile semali akusoloko kulula, kodwa bayitsho loo nto ngaphezulu konyaka sele kugqityiwe ukwenziwa isigwebo kwaye neIreland ayikayifumani imali. Ngaphezu koko, ayifumananga kwano ncedo lukarhulumente. Kungenxa yesi sizathu, kwaye ngenxa yokuba iApple iyaqhubeka nokuxhamla kuncedo olungekho mthethweni, bathathe isigqibo sokusa iIreland enkundleni.
Ngakolunye uhlangothi, I-Ireland yayingonelisekanga sisigqibo esathathiweyo kwaye yabhena kwisigqibo esasenziwe kwi-TEU ukuthintela ukubuyisa eli nani kuqikelelwa emva kokugwetywa. Nangona kunjalo, oovimba abuthinteli nangaliphi na ixesha, ngokweKhomishini yaseYurophu ngokwayo kwingxelo yayo kwaye ibhekisa kwinqaku lama-278 le-TFEU (iSivumelwano sokuSebenza kwe-European Union). Nangona kunjalo, into eyivumelayo kukubuyisa imali kwaye uyibeke kwiakhawunti evaliweyo kulindwe inkqubo yezomthetho.
Okokugqibela, i-EC ikwabonakalisa kupapasho lwayo lweendaba ukuba Ilungu leLungu loLuntu lwaseYurophu kufuneka liphumeze isigqibo sokubuyisela ngokukhawuleza, nto leyo engakhange yenziwe yiIreland. Kwaye oku kuyabavumela ukuba babuyisele ilizwe enkundleni kwaye banokuba nayo Izohlwayo zemali zoku kulibaziseka.
Iinkcukacha ezithe vetshe: CE
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Brussels ihambisa i-Ireland enkundleni ngokungaphumeleli ukuqokelela i-Apple ye-13.000 yezigidigidi
IMovie yongeza inkxaso kwifomathi yevidiyo ye-macOS ePhakamileyo ye-HEVC